Ciidamo katirsan dowladda Hindiya oo markale lagu dilay gobolka Kashmiir. – Shabakadda Amiirnuur
February 18, 2019 9:41 am by admin Views: 70
Iyadoo dhawaan gobolka Kashmiir qarax ka dhacay lagu dilay ugu yaraan 46 askari oo katirsan dowladda Hindiya, ayaa markale waxaa gobolkaas ka dhacay howlgal lagu dhiig bixiyay ciidamada dab caabudka ee Hinduuska.
Dagaal fool ka fool ah oo ka dhacay gobolka Kashmiir ayaa lagu dilay ugu yaraan 4 askari oo katirsan ciidamada dowladda, kuwaas oo isku dayay iney weeraraan deegaanno dhaca xuduud beenaadka ay wadaagaan dalalka Hindiya iyo Pakistaan.
Sarakiil katirsan Police-ka Hindiya oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyay dhimashada dhowr askari oo katirsan ciimadooda, kadib markii ay la kulmeen iskacaabin adag oo uga timid dhanka ciidamo katirsan Jamaacada Jeyshu Muxammad.
Tuullo lagu magacaabo Banqalaan oo hoostagta mandiqadda Buulawaama ayuu ka dhacay dagaalka dhexmaray ciidamada Hindiya iyo kuwa Mujaahidiinta.
Weerar maalintii Jimcaha ka dhacay Kashmiir ayaa lagu dilay 46 askari oo katirsan ciidamada Police-ka, waxaana mas’uuliyadiisa sheegatay jamaaco jihaadi ah oo lagu magacaabo Jeyshu-Muxamad.